Ecamm Live: waa inuu lahaadaa softiweer loogu talagay qulquliye kasta oo nool | Martech Zone
Ecamm Live: Waa inuu lahaadaa Software loogu talagay Streamer kasta oo nool
Talaado, Agoosto 24, 2021 Talaado, Agoosto 24, 2021 Douglas Karr
Waxaan la wadaagay sidaan isugu keenay xafiiska guriga loogu talagalay soo-deynta tooska ah iyo soo-dejinta. Boostada waxaa ku yaal macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qalabka aan soo ururiyey… miiska taagan, makarafoonka, makarafoonka, qalabka maqalka, iwm.
Waxyar kadib, waxaan lahadlaayay saaxiibkeyga wanaagsan Jack Klemeyer, a Shahaado John Maxwell Coach iyo Jack wuxuu ii sheegay inaan u baahanahay inaan ku daro Ecamm Toos ah qalabkeyga softiweerka si aan ugu noolaado qulqulka tooska ah. Software-ka runtii waa mid aad u qurux badan, adiga oo awood kuu siinaya inaad ku abuurto kamarad muuqaal ah nidaamkaaga halkaasoo aad kuheli karto tiro waxqabad ah oo loogu talagalay socodka tooska ah.
Xafiiskeyga dhexdiisa, waxaan awoodaa inaan ku beddelo wax -soo -saarka maqalka, is -weydaarsiga kaameeradda, hagaajiyo gelitaankeyga fiidiyaha, ku daro miisaska ama daaqadaha, ku daro dulmarka qoraalka, duubto maxalliga, ama xitaa si toos ah ugu daabaco Facebook, LinkedIn, Twitch, YouTube, Restream.io , iyo kuwo kale. Waa madal aad u awood badan oo aadan si fudud ku noolaan karin haddii aad rabto maqal iyo muuqaal weyn.
Halkan waxaa ah fiidiyow guud oo muuqaal ah oo ka socda Ecamm Toos ah dadka naftooda…
Noocyada Ecamm Live Ku dar
Waxyaabaha Kaamirada Lagu Galiyo - Muuji oo beddel aragtida tayada HD adoo adeegsanaya kamarad kasta oo USB ah oo ku xiran, kamarad laptop, DSLR, ama kamarad aan muraayad lahayn.
Galinta Fiidiyaha - Daaro qalabka Blackmagic HDMI qabashada, iPhone, iyo wadaagga shaashadda Mac.
Wax soo saarka maqalka - Adeegso makarafoon kasta oo ku xiran si aad u bixiso maqal.
Taageerada 4K - Diiwaangeli oo ku baahi telefishanka 1440p iyo 4K.
Green Screen - Ku beddel asalkaaga shaashaddooda tayo-sare leh ee shaashadda cagaaran.
Dharbaaxo - ku dar qoraalka, tirinta, faallooyinka daawadayaasha, saddex meelood meel hoose, iyo sawiro sida astaan ​​shirkadeed oo loogu talagalay noloshaada.
Korjoogteynta waqtiga-dhabta ah - Ku ilaali baahintaada muuqaalka ku xiran.
Muuqaalo La keydiyey - horay ayaad u sameysan kartaa muuqaalo, adigoo ku dhameystiraya cinwaannada shaashadda iyo shaashadaha kala-baxa. Tani aniga ayay igu anfacaysaa, halkaas oo aan ku yeelan karo muuqaalo ku saabsan meheraddeyda mid kasta.
Wadaagista Shaashadda - Toos ugu soo bandhig bandhigyadaada, casharrada, iyo demos hal guji. Xullo inaad wadaagto shaashaddaada oo dhan, ama kaliya barnaamij ama daaqad gaar ah. Ku dar nolol Sawirka-sawirka u sii daayo si aad u taabato shakhsi ahaaneed.
Isdhexgalka Skype - ku samee wareysiyo shaashad fudud ah adigoo adeegsanaya wicitaan fiidiyoow ah oo Skype ah, waxaadna arki doontaa martidaada oo muujineysa inay yihiin ilo kaamiro Ecamm Live.
Nasashada - la midoobida 'Restream.io' iyo 'Switchboard Live' macnaheedu waa qulqulka tooska ah ee istiraatiijiyado badan isla mar ahaantaana waa mid fudud oo hal guji Iyo taageerid la dhisay oo loogu talagalay iskudhafka wada sheekaysiga ee 'Restream', Ecamm Live wuxuu xitaa soo bandhigi karaa faallooyinka wada sheekaysiga ee ka imanaya 20 dhufto.
Daawo Video - Fidiyo feyl fiidiyow ah oo loogu talagalay hordhaca iyo qaybaha horay loo duubay.
Waa kan aragtida miiskayga oo leh dhammaan awoodaha:
Mid ka mid ah astaamaha iigu muhiimsan aniga ayaa ah in Ecamm Live ay leedahay kontaroolo aan caadi aheyn si aan u hagaajin karo kan Logitech BRIO kamaradda webka weyne & digsi, dhalaalka, heerkulka, midabka, dhererka, iyo shaandhada gamma.
Ku Bilaw BILAASH Ecamm Live
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Ecamm Toos ah iyo Amazon waxaana kujiraa xiriiriyeyaasha kujira boostadan!
Tags: furaha qulqulka caadadafacebook liveToos u soco FacebookSocodka Facebookxiriirinta tooska ah ee tooska ahstreamingin socodkasocodka noolaanshahalogitech briosaddex meelood meelnasashonasasho.ioStreamingsoftiweer softwareboodhadhka tooska ahdhifashoqulqulka tooska tooska ahqulqulka qulqulkavideo Streamingsoftware socodka videoYouTube toos u socoYouTube socodka
Cloud Cloud Optimizely: Sida Loo Isticmaalo Mashiinka Istatiijiyada Si A/B Imtixaanka Ugu Xariifsan, Oo Degdeg Ah
Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah & Saadaasha